‘पुरुषबिना महिला बाँच्न सक्छन्, तर महिलाबिना पुरुष बाँच्न सक्दैनन्’ – Lokpati.com
केपी शर्मा ओली भारत मृत्यु नेकपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन अमेरिका पक्राउ प्रचण्ड नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राशिफल सरकार
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Apr 3, 2019
अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले महिला अधिकारका बारेमा नयाँ बहस अगाडि सारेकी छिन्। उनले महिला एक्लै बाँच्न सक्ने तर पुरुष एक्लै बाँच्न नसक्ने बताएकी छिन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा उक्त कुरा उल्लेख गरेकी हुन्। यस्तो छ उनको अन्तर्वार्ता।
समान भनिन्छ। तर, मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन्, किनभने महिला सहनशील, सुन्दर र गर्भधारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन्। पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद सारा चुनौती चिरेर पनि नेपाली महिला उच्च पदमा पुग्न सफल छन्। महिलामा भएका यस्ता गुण, क्षमता एवं विशेषताले उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाएको छ।
तपाई महिला नै हुनुपर्ने कारण के हो ?
म महिला नै हुनुपर्ने एउटै मात्र कारण छैन। शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक रूपमा म महिला हुँ। मभित्रको विचार, व्यवहार, धैर्य, सहनशीलता अनि ममता नै म महिला बन्नुपर्ने कारण हुन्। घरपरिवार, बालबच्चा, कार्यालय मात्र होइन, देश हाँक्ने र सम्हाल्ने हरेक महिलाले पुरुष भएको अनुभूति गर्न सक्छन्। तर, हरेक पुरुषले आफूलाई महिला अनुभूति गर्न गाह्रो छ।
संसारमा लिङ्गभेद किन भएको होला ?
संसारका जुनसुकै कुनामा गए पनि पुरुषत्व हावी छ। जस्तोसुकै विकसित मुलुक र उच्च शिक्षित महिलामा पनि कुनै न कुनै रूपमा विभेद कायमै छ, चाहे त्यो अदृश्य नै किन नहोस्। यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ महिलाहरू कति साहसी छन् ? पुरुषहरू सदैव महिलाको शक्ति र क्षमतासँग डराउँछन्। पछिल्लो समयमा महिला दमन, हिंसा र विभेदका बाबजुद पनि शक्तिमा आउन थालेका महिलाको शक्ति र क्षमतासँग डराएर संसारभर नै लिङ्गभेद हुँदै आएको हो।
पुरुषबिना महिलाले मात्र संसार चल्छ ?
पुरुषविना महिलाको संसार अघि बढ्न सक्छ। तर, महिलाविना पुरुषको संसार अघि बढ्न सक्दैन। दुवैलाई एक–अर्काको खाँचो होला। तर, महिला एक्लै पनि बाँच्न सक्छन्, अघि बढ्न सक्छन्। तर, पुरुष सक्दैनन्।
तपाईले पुरुष र महिला दुवैको जीवन जिउँदा गरेको फरकपन के हो ?
मलाई भित्रैदेखि महिला हुँ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। तर, समाजका लागि जबरजस्ती आफूलाई पुरुषका रूपमा ढाल्न खोज्थें, त्यो जटिलता म मात्र अनुभूति गर्न सक्छु। जे–होस्, दुवै जीवन जिउँदा अहिले मलाई महिला भएकोमा गर्व लाग्छ।
पुरुष भएर अरूलाई दबाएर बाँच्न पाउने च्वाइस पनि ममा थियो। तर, मैले नारी जीवन रोजेँ। अरूमाथि हिंसा एवं विभेद गर्नु नपरोस् भनेर मैले महिला नै हुन चाहेँ। पुरुष सदैव पुरुषत्वको धाकमा महिलामाथि अधिकार जमाउन खोज्छ भने महिलाहरू त्यस्ता चुनौतीलाई चिरेर पनि अघि बढ्न अग्रसर हुन्छन्।
महिला र पुरुषबारे तपाईको परिभाषा के हुन्छ ?
महिलाहरू सहनशील, चौतर्फी व्यवस्थापकीय सीप र क्षमतायुक्त, जति नै दबिएर बसे पनि बाहिर आउन सक्ने हुन्छन्। नारीसँग अद्वितीय शक्ति छ–रजश्वला र आमा बन्न सक्ने। नारी शब्द सुन्दर र शक्तिशाली छ, जुन आफैं उत्पन्न भएको कुरा होइन, नारीभित्र रहेका विविध क्षमतायुक्त तत्वले बनाएका हुन्।
पुरुषलाई म हैकमवादी सोच भएको प्राणी भन्न चाहन्छु, जसको सोच कहिल्यै पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुँदैन, थोरै भइहाले पनि केही न केही अंश जीवितै रहन्छ।
अखबारमा राखेका खानेकुरा खाए क्यान्सर
दिन नौ पटक चुम्बन : दर्जनौं रोगको उपचार (अनुसन्धान)